Xuquuqda Waalidka. | CAADI
Waalid ahaan Waxaan U Baahan nahay Caruurteena:
-> In fikradaha jinsi ahaaneed laga saaro barnaamijyada ka jira dugsiyada.
-> Barnaamijyada cagajuglaynta ee wax ka qabta dhammaan noocyada xoogsheegashada ayaa laga fuliyaa dugsiyada.
-> In macallimiintu ay leeyihiin hagitaan adag oo ku saabsan waxa lagu dhigayo arrimaha ku saabsan galmada.
-> Barnaamijyada galmadaasi waxay ku noqdaan casharada bayoolajiga galmada.
-> Taasi waxay dhaafaysaa sawirada galmada oo laga saaray dhamaan barnaamijyada galmada.
-> Barnaamijyada galmada ee da'daasi waa kuwo ku habboon da'da.
-> In carruurta aan lagu xadgudbin iyaga oo la faray inay xafidaan sirta fasalka.
-> In waalidku marin u lahaan karaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxyaalaha barnaamijyada galmada la xiriira.
-> In carruurta aan la siin marin degel internet oo la xiriira galmada iyo galmada.
-> Waalidku waxay xaq u leeyihiin inay go'aamiyaan akhlaaqda ilmahooda.
-> Dhallintaas, oo taageero qoys leh, ayaa loo oggol yahay inay si dabiici ah u xalliyaan arrimaha jinsiga.
-> Waalidku waxay xaq u leeyihiin inay go'aamiyaan jihada ilmahooda noloshooda.